Iyo Pandemic Yapera! Ko FITUR Yakakonzera Kufunga Patsva Kwekushanya Kwenyika? | Utano
Location: musha » Kutumira » utano » Iyo Pandemic Yapera! Ko FITUR Yakakonzera Kufunga Patsva Kwekushanya Kwenyika?
Iyo Pandemic Yapera! Ko FITUR Yakakonzera Kufunga Patsva Kwekushanya Kwenyika?
FITUR yakapupurira here kana kutotanga kupera kweCOVID-19 denda?
FITUR, iyo huru yeSpanish inotaura yekufamba uye kutengeserana kutengeserana show munyika irikuenderera muguta guru reSpain, Madrid.
Spain, Portugal, UK, Netherlands, nedzimwe nyika dzakamira pedyo kuti dzisiye zvirambidzo zveCOVID, kuvhurazve nyika kuchinhu chitsva uye kushanya.
Neindasitiri inokuvadza yekushanya, neWorld Tourism Organisation (UNWTO) ine muzinda wayo muSpain, uye pamwe FEATURE ririkuenderera mberi muMadrid, hazvingangove zvakangoitikawo kuti Spain yave kuronga kurapa Omicron COVID-19 denda senge chero kutonhora.
Pakatanga kuziviswa denda re coronavirus, veSpain vakarairwa kuti vagare pamba kweinopfuura mwedzi mitatu. Kwemavhiki akawanda, vakanga vasingatombobvumirwi kunze kuti vaite maekisesaizi. Vana vakarambidzwa kupinda munhandare, uye upfumi hwakapotsa hwamira.
Asi vakuru vakuru vakatenda matanho ekudzivirira nekudzivirira kudonha kuzere kwehurongwa hwehutano. Upenyu hwakaponeswa.
Spain ndiyo ine mwero wepamusoro wekudzivirira muEurope, uye zviremera hazvichatauri. Spain iri kugadzirira kubata COVID kwete se emergency asi chirwere chiripo kuti chigare.
Inogona kunge ingori nyaya yenguva kuti iyo yese yeEurope itore nzira nyowani iyi yekubata neCOVID. Portugal neBritain dzave kutofunga nezvazvo.
European Union inofanirwa kufunga nenzira yakafanana, yaive meseji yeMutungamiriri weSpain, Pedro Sanchez.
COVID-19 inogona kurapwa nenzira imwechete nefuruu kana gwirikwiti. Zvinoreva kuti kubaya kunobatsira kudzivirira mhedzisiro yakakomba, uye vanhu vane njodzi yakanyanya vanongoda kuzviziva uye kubata nazvo.
Sangano reWorld Health Organisation rakati zvanyanya kukasika kufunga chero shanduko yekukurumidza. Sangano harina nzira yakanyatso tsanangura yekuzivisa COVID-19 chirwere chiri kupararira, asi nyanzvi dzaro dzakambotaura kuti zvichaitika kana hutachiona huchinyanya kufanofungidzira uye pasina kubuda kwakasimba.
Dr. Anthony Fauci, murume anoona nezveCOVID muUnited States, akataura pamusangano weWorld Economic Forum nemusi weMuvhuro. Dr. Fauci vakati COVID-19 haigone kutorwa seyakaoma kusvika yadzika kusvika "padanho risingakanganise nzanga."
Mutungamiri weWorld Tourism Network Dr. Peter Tarlow, avo vanove nyanzvi ine mukurumbira pasi rose munyaya dzekuchengetedzwa kwevashanyi, vakataurawo mumashoko nezuro uye akatanga kubuda pa eTurboNews: "Yave nguva yekuvakazve mafambiro uye kushanya ikozvino.
"World Tourism Network nebhodhi rayo rinoshuvira kuzivisa pasirese kuti WTN inomira nekwainoenda uye indasitiri yezvekushanya pasi rose mukubatsira kuti kufamba kusvike kune vese."
European Center for Disease Prevention and Control yayambira nyika kuti dzichinjire kune dzimwe nzira dzekubata neCCIDID-19 mushure mekunge chikamu chedenda chapera. Sangano iri rakataura mukutaura kuti dzimwe nyika dzeEU kuwedzera kuSpain dzichada kutora "nzira yenguva refu, yakadzikama yekutarisa."
Hazvina kujeka kuti zano rekupedzisira richagara sei ne "zero-COVID" maitiro akatorwa neChina nedzimwe nyika dzeAsia uye zvingakanganisa sei kufamba kwenyika.
Kupinzwa muchipatara uye kufa munyika dzakabaiwa kwakadzikira zvakanyanya pane kuvhiyiwa kwakapfuura.
MuUnited Kingdom, kupfeka masiki munzvimbo dzeveruzhinji uye COVID-19 mapasipoti zvichabviswa muna Ndira 26, Mutungamiri Boris Johnson akarondedzera.
Boris Johnson China Covid Covid-19 COVID-19 dambudziko Europe European Union utano Sangano Putugaro Speini ushanyi World Economic Forum World Health Organization World Tourism Sangano Wtn
Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vakafa muLiberia munamato
Aruba inozivisa zvitsva zvinodiwa zvekupinda kune vafambi veUS neCanada
Yekutanga Airbus A321neo ine Airspace yemukati yakaunzwa...
Lynx Air: New Halifax ndege uye nzira
Sei MaAmerican mazhinji Vachiri Kupfeka Masks?
New Phase 1 Clinical Trial yePediatric CNS Tumors
Russian Railways yakatonga zvisiri izvo mushure mekushaya chisungo ...
New Pilot Chidzidzo paChirwere cheAlzheimer
Unoziva sei nguva yekuenda kuER kana iwe ...
Kuverengwa kweBP zvirinani kumba kana kwachiremba...
WaterWipes Haikwanise Kuita Zvichemo Nezve Diaper Rash
Basa reGiant Pandas paClimate Change Dziviriro...
Wakagadzirira Kushandira Cocktails Market Outlook Kavha Itsva...
Yakanyanya Kushanya: Mishoni yeItaly kune Yemweya...
Seychelles neVanilla Islands pamwoyo wekubatana ...
Uniglobe Travel Inogadza Mutengesi Anofarira Mutsva
Mvumo yeNew Study Solid Tumors uye Non-Hodgkin...
India Tour Operators Vanoti Rutsigiro Rwekushanya rwakawanda runodiwa
Masangano eUN anodaidzira kuti zvirambidzo zvekufamba zvibviswe
Bhanga reNyika: Kukura kwehupfumi hweAsia-Pacific kuchanonoka ...
Botanical pancreatic cancer drug inouraya 100% yegomarara ...
Sandals Foundation Inobatsira Zvikoro NeMvura Zvirinani...
Main Trends muDzidzo Inoenderera mberi muna 2022
British Airways inodzima mazana echirimo chayo chakakurumbira ...
Tanzania Yogadzirira Komisheni yeUNWTO yeAfrica...
Hutano Kuchembera Munzvimbo Kuburikidza NeArtificial Intelligence...
Kubatanidzwa kutsva kwekiriniki yekuedza kurapwa kwe ...
Mitengo yechikafu pasi rose yakwira pakati pemhirizhonga yeRussia...
Mhedzisiro Yakanaka muVarwere vane Neovascular Age-Related...
Mishonga Itsva Yekuzvimba
Erika Budai anoti:
Ndira 21, 2022 pa07: 15
Tinokutendai Juergen nebasa renyu rakaoma rekuti tirambe tichigadziridzwa nenhau dzichangoburwa muTourism World.